आजको दिन तपाइको कस्तो ? हेर्नुस् राशिफल - Everest Dainik - News from Nepal
आजको दिन तपाइको कस्तो ? हेर्नुस् राशिफल
वि.सं २०७५ साल साउन ३ गते, बिहीबार। इश्वी सन् २०१८ जुलाई १९ तारिख। नेपाल संवत् ११३८ दिल्लाथ्व। आषाढ शुक्लपक्ष, तिथि– सप्तमी, १८ः३२ बजेउप्रान्त अष्टमी।
बृष- मनोरञ्जनमा अलमलिँदा लक्ष्यमा बाधा पुग्नेछ। परिस्थिति अनुकूल रहे पनि भौतिक सुविधाले खर्च निम्त्याउन सक्छ। बुद्धिको उपयोग गर्दा लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नेछन्। अपूर्ण ज्ञानलाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
कर्कट- छोटो समयमा राम्रै उपलब्धि हातलागी हुनेछ। स्रोतसाधन जुट्नाले गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। मिहिनेतले दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ।
याे पनि पढ्नुस कस्तो बित्दैछ आज तपाइको दिन? यस्तो भन्छ राशिफल
याे पनि पढ्नुस कस्तो छ तपाईंको आजको राशिफल ?
मकर- प्रक्रिया नमिल्नाले काम दोहोर्याउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। तत्काल फाइदा नहुने काममा जुट्नुपरे पनि उपलब्धिको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। समाजमा काम देखाएर फाइदा उठाउनुपर्ने समय छ।
मीन- घुमफिर तथा मनोरञ्जनको समय छ। भौतिक साधनले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ। काममा साथीभाइबाट सहयोग मिल्नेछ। प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो बनाउनेछ। अतिथिको रूपमा सत्कार पाइनेछ। -नेपाली पात्रो
ट्याग्स: Ajako rasifal, अाजको राशिफल, दैनिक राशिफल, राशिफल